Mali : Fifidianana Hamaritra ny Hoavy Amin’ity Taona 2018 ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2018 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, Français
Mampiharihary ny tsy fisian'ny fandriampahalemana maharitra miorim-paka ao amin'ny firenena ny fifanandrinana indray teo amin'ny tafika Barkhane (hetsika fitandroana ny fandriampahalemana ataon'ny tafika frantsay) sy ny vondrona jihadista tao avaratr'i Mali nandritra ny faran'ny herinandron'ny paska, volana vitsivitsy monja mialoha ny fifidianana hamaritra ny hoavin'ny firenena.
« Pas de trêve pascale au Mali » [Tsy misy fampiatoana ady mandritra ny paska ao Mali] hoy ny lohatenin-gazety Ouest France. Nisy tokoa ny fifampitifirana mahery vaika teo amin'ny djihadista sy ny mpiady mpanohana ny fitondrana tamin'io faran'ny herinandro io. Ny hetsika famantarana sy fifehezana tany niarahan'ny tafika frantsay tamin'ny milisin'ny MSA-GATIA, vondrona mitam-piadiana iray manohana ny governemantan'i Bamako teo amin'ny sisintany iraisain'i Mali sy Niger no niafara tamin'ny famonoana mpikambana miisa 30 an'ny vondrona mpampihorohoro mitam-piadiana iray. Tsy nisy miaramila frantsay manatontosa ny opération Barkhane maty na naratra nandritra ny fifampitifirana.
Efa mampisy fanantenana ny fahombiazan'io bemidina io – tahaka ny ankamaroan'ny bemidina natao faramparany teo – saingy tsy mbola mampilamina ny toe-draharaha ao avaratr'i Mali izay tsy niova nandritra ny taona maro. Niparitadritaka sy voaroaka tany avaratr'i Mali ny vondrona djihadista hatramin'ny taona 2013. Saingy misy ny faritra midadasika ao amin'ny firenena tsy mbola voafehin'ny fahefana – na dia eo aza ny fanohanana mavitrika avy amin'ny tafika frantsay. Ankoatra izay, manararaotra ny korontana navelan'ny fifanandrinana,nihaniroborobo ny asan-jiolahy araka izay nasongadin'ny famonoan'olon-tsy fantatra ny kaporaly iray tao afovoan-tanànan'i Tombouctou.
Ny tena henjana, nihoatra sisintany ankehitriny ka nahazo ny firenena mpifanolo-bodirindrina, indrindra fa i Burkina Faso sy i Niger ny fifanandrinana. Hany ka nahatonga ny fampitandremana avy amin'ny Firenena Mikambana manoloana ny tsi-fandriampahalemana izay: « mihamivelatra sy mihamahazo vahana ao afovoan'ny firenena » tamin'ny tatitra nataony vao haingana. Ary ny tena mampanahy dia ho tafatoetra maharitra ao Sahara Lehibe ny Fanjakana Islamika. Nanoritra ny Firenena Mikambana :
hoy ny mpanolotsaina akaiky ny Praiminisitra Soumeylou Boubèye Maïga.